सार्वजनिक सवारीमा इ—टिकेटिङ् प्रयोगमा ल्याउने अभ्यास गर्दै महानगर -
१ श्रावण २०७७, बिहीबार २१:४७ हिमवत्खण्ड सम्बाददाताLeaveaComment on सार्वजनिक सवारीमा इ—टिकेटिङ् प्रयोगमा ल्याउने अभ्यास गर्दै महानगर
काठमाडौं । बन्दाबन्दीपछि काठमाडौंमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीमा इ—टिकेटिङ् प्रयोगमा ल्याउने तयारी अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । यसका लागि प्रयोगमा ल्याइने अटोमेटिक फेयर कलेक्सन (एएफसि) प्रणालीका बिषयमा आज फिनटेक इन्टरनेशनलका प्रतिनिधिहरुले महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा प्रस्तुति गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातको टिकटलाई बिद्युतीय बनाएपछि बालबालिका, बिद्यार्थी, जेष्ठनागरिकलगायत कुन बर्गका मानिस यात्रा गर्छन्? कुन समयमा र कुन ठाउँमा यात्रुको बढी चाप छ । सूचना प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै हरेक यात्रुले तिरेको रकम सिधा बैङ्क खातामा जम्मा हुन्छ । त्यस्तै संकलित रकम हरेक दिन बेलुका स्वचालित प्रणालीबाट जसको भागमा जानु पर्ने हो । यसको बैङ्क खातामा जम्मा हुन्छ ।
यो प्रणाली बसमा जडान हुनेछ । बसमा चढ्दा र उत्रँदा यात्रुसँग भएको कार्ड ट््याब गर्दा स्वतः उसको यात्रा दुरी कायम भएर यातायात व्यवस्था बिभागले तोकेको भाडा काटिन्छ । यदि कसैसँग कार्ड छैन भने सहचालकसँग कार्ड लिन सकिने प्रवन्ध मिलाइने छ । कार्ड लिन नचाहने यात्रुलाई सहचालकसँग भएको मेसिनबाट बिद्युतीय टिकट जारी गरेर भाडा लिइन्छ ।
प्रणालीमा संकलन भएको रकम हरेक दिन साँझ स्वतः ब्यवसायीहरुको बैक खातामा जम्मा हुन्छ ।यो प्रणालीलाई फिनटेकले भारतको बैङ्लोरस्थित ओम इन्फोटेकसँग प्राबिधिक साझेदारिता गरेको छ ।
ठमेलको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउन घरधनी र व्यावसायी एकै ठाँउमा,सरकारको अभिभावकिय भूमिका खोजिँदै
अर्को अकाट्य प्रमाण : अयोध्या र मथुराका बीचमा वाल्मीकि आश्रम !
महानगरको राहत : १ लाख ३७ हजारलाई राहत, साँढे २ लाख बढिलाई निःशुल्क खाना वितरण
१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार १०:४६ हिमवत्खण्ड सम्बाददाता
उपत्यकका नाकाहरुमा थप कडाई र अग्रभागमा खटिनेहरुको कोरोना परीक्षण आवश्यक रहेको ४६ औं कार्यपालिका बैठकको निष्कर्ष
६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ११:५० हिमवत्खण्ड सम्बाददाता